WEYER IHLABATHI - Shanghai Weyer Electric Co., Ltd.
1999 inkampani yasekwa
2003 Inkqubo yoLawulo loMgangatho ye-ISO9001
2005 Kumiselwa iilebhu zala maxesha neziphezulu
2008 Iimveliso zethu zigqithile kwi-UL, CE
2009 Isixa sentengiso sonyaka sidlule kwi-100 yezigidi ze-CNY okokuqala
2013 Inkqubo ye-SAP yaziswa, inkampani yangena kwixesha elitsha lolawulo lwenkqubo
2014 Amashishini amaNqanaba oPhezulu oPhezulu kunye neeMveliso eziDumileyo
2015 Kufunyenwe isiqinisekiso seNkqubo ye-IATF16949; iphumelele isihloko se "Shanghai Brand Edumileyo" kunye "neGiant encinci yeTekhnoloji"
2016 Kugqityiwe ukulungiswa kwezabelo kunye nezicwangciso zokufumana uluhlu ziye zaphehlelelwa. I-Weyer Precision Technology (i-Shanghai) Co., Ltd. yasekwa.
2017 ICandelo leNkcubeko laseShanghai elinikezelweyo; Iimveliso zethu zaziphumelele i-ATEX kunye ne-IECEX
2018 Isiqinisekiso soMbutho woHlelo lwe-DNV. I-Weyer Precision yafakwa ekusebenzeni
2019 Iminyaka engama-20 isikhumbuzo se-WEYER
Yasekwa ngo-1999, iShanghai Weyer Electric Co., Ltd.yishishini eliphezulu-lobuchwephesha eligxile kwimveliso yamadlala ekhebula, izixhobo zokufaka izinto zokutyubhisha kunye netyhubhu, imixokelelwane yekhebula kunye nezihlanganisi zeplagi. Singumboneleli wesisombululo senkqubo yokukhuselwa kwentambo, sikhusela iintambo emasimini ezinje ngezithuthi zamandla amatsha, umzila kaloliwe, izixhobo zomoya, iirobhothi, izixhobo zokuvelisa amandla omoya, izixhobo zoomatshini, oomatshini bokwakha, ukufakelwa kombane, ukukhanya, iilifti, njl. Amava eminyaka engama-20 yenkqubo yokukhusela intambo, u-WEYER uzuze igama elivela kubathengi kunye nabasebenzisi bokugqibela ekhaya nakwamanye amazwe.
Umgangatho yinto ebalulekileyo kwifilosofi yecandelo le-WEYER. Sinovavanyo lweqela olusebenzayo lokuvavanya rhoqo kwaye ngokungakhethiyo iimveliso kwilabhoratri yethu yamanye amazwe. Siqinisekisa umgangatho weemveliso zethu phantsi kwenkqubo eqhelekileyo kunye nokubonelela ngokukhawuleza emva kwenkonzo yolondolozo lweemveliso. Ulawulo lwethu lomgangatho luqinisekisiwe ngokwe-ISO9001 & IATF16949.
Itekhnoloji ikhokelela kwinto entsha. Siyaqhubeka nokukhulisa utyalo-mali, imveliso entsha, umatshini kunye netekhnoloji. Sineqela le-R & D elomeleleyo lokwenza izisombululo ezitsha zoyilo zokunceda abasebenzisi bokugqibela bakhusele ukhuseleko lweentambo kunye nokongeza izibonelelo kwezoqoqosho. Sikwanalo neqela lobuchule lobumbeko lokuhlaziya ubume besikhunta sisebenzisa itekhnoloji yakutshanje yokubumba yokuphucula umgangatho weemveliso kunye nokunciphisa iindleko.
UWeyer unombono wenkonzo ephezulu: zama konke okusemandleni ethu ukubonelela abathengi ngeenkonzo ezahlukileyo, zokufaka uphawu kunye neenkonzo ezikhawulezayo. UWeyer uhlala enika esona sisombululo sisiso seprojekthi yokwenza inkqubo yokhuselo egqibeleleyo. UWeyer uhlala ehambisa ngexesha lokuhlangabezana neemfuno zabathengi. U-Weyer uhlala enikezela ngokufanelekileyo emva kwenkonzo yokufakwa kunye nokugcinwa.
2. IZiko lokuXhasa ngezixhobo
3. Umatshini wokwenza iMetal
4. Umngundo Machine
5. Indawo yokuGcina
6. Indawo yoGcino 2